Senior Doctors Down Tools in Zimbabwe - allAfrica.com
Senior doctors and consultants at one of Harare's main hospitals have said that despite assurances from the government, conditions at Parirenyatwa Hospital have worsened, putting patients' lives at risk.
New Zimbabwe, 14 March 2019
The strike by senior doctors at Parirenyatwa Hospital has triggered a fall-out between Health Minister Obadiah Moyo and management at the country's prime medical institution. Read more »
Striking doctors protest at Parirenyatwa (file photo).
New Zimbabwe, 13 March 2019
Senior doctors at Zimbabwe's foremost health facility Parirenyatwa Hospital have downed their tools in protests against shortage of essential drugs and equipment. Read more »
All Zimbabwean doctors who had withdrawn their labour from government hospitals have now returned to work. This follows an announcement by their association calling off the 40-day ... Read more »
Zimbabwe: Junior Doctors 'Grudgingly' End Crippling Strike
Zimbabwe: Doctors' Strike Over
The government has warned that junior doctors will face disciplinary action if they want to return to work, with Acting President Constantino Chiwenga accusing the medics of ... Read more »